Inzululwazi | TeraNews.net |
Nikon CFexpress Uhlobo B 660 GB for Z9
AV-umamkeli Marantz SR8015, amagqabantshintshi, iinkcukacha
Unikezelo olunomdla oluvela ku-Oclean nge-11.11.2021
Izazi ngeenkwenkwezi ezivela kumazwekazi amaninzi ngaxeshanye zathetha zixhasa ingcamango yobukho beplanethi yesibini efana noMhlaba. Ngoku ka…
I-Tonometer i-OMRON M2 Esona sincedisi sonyango silungileyo
Imakethi yetonometer ityebile kwizibonelelo. Kwaye umthengi ulahlekile kuludwe olunikezelwa zininzi zabavelisi abavela ezahlukeneyo ...
Njengoko amaqhawe kolunye uthotho athi - "Ubusika buyeza." Kwaye unokuphikisana malunga nenqanaba lobushushu behlabathi ngokungapheliyo. Kuyo nayiphi na…
Unyango ngeebhanki zonyango (unyango lokutya) luye lwaziwa ngabantu ngaphezulu kwesigidi seminyaka. Kwiincwadi zezifundo ngamayeza, kwicandelo ...
I-NASA ibonelele ngethuba lokuba abantu baqwalasele iplanethi ebomvu ngokusebenzisa iilensi zePareseverance rover. WaseMelika ...
Umnwe wedijithali wePulse Oximeter
Abavelisi beewotshi ezifanelekileyo kunye nezacholo banokungqina ukusebenza kwee-oximeter zokubetha kwizixhobo zabo njengoko bafuna. Kodwa oku ...
Inyanga ebomvu epinki yinto yendalo
Inyanga ephezulu kakhulu (supermoon) yinto yendalo eyenzeka ngalo mzuzu weyona ndlela ikufutshane yeplanethi yoMhlaba kunye neNyanga yesathelayithi. ...
Kwiindawo zikawonke-wonke xa undwendwela ivenkile, isikhululo segesi okanye indawo yonyango, unokufumana izixhobo ezininzi eziluncedo. Kwaye ngo ...
Khumbula eli binzana "Inkawu sele iza kuphuma engxoweni"? Yabhengezwa ngu-Elon Musk kwi-2019 ngokubhekisele ekuphunyezweni ...
Umboniso bhanyabhanya othi I am Legend - lo mboniso wenziwa ngowuphi unyaka
Isihloko esishushu kuthungelwano lwentlalo ekuqaleni kuka-2021 sisitofu sokugonya se-COVID kunye neziphumo zaso. Ababhali bezithuba bathumela imifanekiso kwi ...
Iteleskopu yeenkwenkwezi F30070M ene-tripod
Inqanaba lokungena elincomekayo linokufumaneka kwiishelufa zevenkile ye-Intanethi. Iilensi ezinkulu nomfanekiso ocacileyo wekristale ...
Xiaomi Mijia Sonic Ibhulashi yamazinyo T100
Ibrashi yamazinyo yombane yimveliso yokhathalelo lomlomo eya kuthi ikhuphisane ngokulula neebrashi eziqhelekileyo. Yonke into…
Isibane esili-Difeisi-ikamva selifikile
Kuphela ziidola ezili-10 zase-US kunye nokusebenza okunje kwe-chic okunikezelwa sisibane esine-Difeisi. Ingqwalaselo-ibhalbhu yombane (1 ...
Ukuhluza kumalungu: ngenxa yento kwaye iyingozi
Isandi sokuqhekeka ngexesha lokuhamba okanye ukunyakaza okusebenzayo kuhlala kubangela uloyiko ebantwini. Ukuqunjelwa kumalungu kungathandi ...
Umbane wezinto zomoya uthatha amandla angakanani
Ukuthanda abalandeli kumacandelo avulekileyo engoma bahlala bekhalaza ngeemoto zabo. Njengaye, kukho isixhobo sokungenisa umoya, amandla emoto ...